छाति पिटेर भन्छु, एमाले फेरि बहुमत ल्याएर सरकारमा फर्किन्छ : विष्णु पौडेल – Points Nepal
छाति पिटेर भन्छु, एमाले फेरि बहुमत ल्याएर सरकारमा फर्किन्छ : विष्णु पौडेल
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०५, २०७८ समय: १४:११:३४
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले जनताको साथ र समर्थन पाएर पार्टी फेरि सरकारमा फर्किने बताएका छन्। एमाले संखुवासभाको जिल्ला अधिवेशन उद्घा’ट’न समा’रोहलाई सोमबार खाँदबारीमा सम्बोधन क्रममा उनले यसो भनेका हुन्।
‘जनताको साथ र समर्थन लिएर सरकारमा आउनेछौँ। सदनको अंकगणितले हामीलाई केही समय सरकार बाहिर पठाएको छ। तर हामी बहुमत सहित सरकारमा आउँछौँ’, उनले भने,।
‘एमालेलाई बाहिर पठाएपछि कांग्रेस एमालेले आफ्नो दि’ग्विजय हुने ठा’नेका थिए। तर उनीहरुको हविगत हामीले हेरिरहेका छौँ।’ उनले २०७४ को स्थानीय चुनाव पनि एमालेले एक्लै ल’डेको बताएका छन्।
‘एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि एक्लै चुनाव ल’डिरहेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले विजयी भएको थियो’, उनले भने, ‘अब पनि विजयी हुन्छ। एमालेलाई विजयी हुन सरकार चाहिँदैन, सत्ता पक्ष भइरहनु पर्दैन। जनताको विश्वास र साथ लिएर एमाले फेरि विजयी हुन्छ।’
उनले एमाले हिजोभन्दा बलियो र श’क्तिशा’ली भएर अघि बढेको पनि बताए। ‘हामी हिजो थालेका राम्रा कामलाई अघि बढाउन तयार छौँ’, उनले भने, ‘जनताले एमालेलाई विजयी गराउँछन्।’
पौडेलले एमाले सरकारमा आएपछि नै किमाथांका-विराटनगर सडक सुरु गरेको बताउँदै त्यो आयोजनालाई एमालेको सरकार आएपछि पूरा गरिछाड्ने पनि वाचा गरेका छन्। नेपालखबर बाट
योगेश भट्टराई निर्दोष छन्, नारायणहिटी भाडामा दिन पाउनुपर्छ : विष्णु रिजाल
नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले नारायणहिटी राजदरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा भाडा प्रकरणमा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईको कुनै दोष नरहेको दाबी गरेका छन्।
नारायणहिटी राजदरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा भाडामा दिने निर्णय एकदम सही रहेको रिजालले बताए। साथै सामान्य विषयमा पनि भट्टराईको चरित्रहत्याको प्रयास भइरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
उनले भने, ‘नारायणहिटी राजदरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा भाडामा दिनु गलत छैन। हामी बुझेर बोलिरहेका छौं कि नबुझीकन बोलिरहेका छौं ? त्यो पर्यटकीय ठाउँ हो भने आधारभूत सुविधा त दिनुपर्छ नि।
क्याफ्टेरिया चलाउन दिनु अपराध हो र ? यति सामान्य विषयमा पनि चरित्रहत्या गर्नु अन्याय हुन्छ। यो निर्णय हिजो पनि ठिक थियो, आज पनि ठिक छ, भोलि पनि ठिक हुनेछ।’
रिजालले ६ महिनाको बीचमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको काममा सन्तोष गर्ने कुनै ठाउँ नरहेको आरोप पनि लगाए। उनले भने, ‘बितेका ६ महिनामा सरकारले खोपलाई नै सबभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरेको छ। एक करोड खोप मौज्दात छ भन्छ तर त्यसको पनि व्यवस्थापन छैन। अहिले हाहाकार छ।
३५ प्रतिशत जनताले पनि पूर्ण खोप नपाएको स्थितिमा सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड चाहिने निर्णय कति पूर्वाग्रही छ ? एमालेलाई हटाएर सत्तामा आउनु नै गठबन्धन सरकारको महान् उपलब्धि हो।’
गठबन्धन सरकारले विदेश नीतिमा पनि खेलबाड गरेको रिजालले बताए। उनले थपे, ‘सरकारले आफ्ना विषय दृढतापूर्वक उठाउन सकेको छैन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीका विषयमा पनि लत्तो छाडेको छ।
बरु भारतले नै वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सक्छौं भनेको छ। नेपाल सरकार त सत्ताको मातले लट्ठिएको छ। विदेश नीतिमा यति लाचार सरकार त कुनै पनि देशमा हुँदैन होला। हामीलाई त सरकार छ भन्न पनि लाज हुन्छ।’
Last Updated on: January 19th, 2022 at 2:11 pm